दैनिक एउटा अमला खाँदा स्वास्थ्यलाई कस्ता फाइदा पुग्छन् ?
Homeबिबिधदैनिक एउटा अमला खाँदा स्वास्थ्यलाई कस्ता फाइदा पुग्छन् ?
अमला हामीले खाइरहने फल मध्ये एक हो । यो स्वादमा अमिलो हुन्छ । यो भिटामि’नयुक्त फल हो । त्यसैले यो स्वास्थ्यको लागी निकै लाभदायक मानिन्छ । चि’कित्षकहरु हरेक दिन एउटा अमला खान सल्लाह दिने गर्छन् । अमला खानुभन्दा पहिले अमलाले हामीलाई के फाइदा पुर्याउँछ भन्ने कुरा जान्नु जरुरी हुन्छ ।अमला खाँदा हामीलाई पुग्ने फाइदा यस्ता छन् :
१) मुटुको स’मस्या : अमलाले हाम्रो शरीरमा नराम्रो को’लेस्ट्रो’ललाई घ’टाउन मद्धत गर्छ । यसले गर्दा हामीलाई मुटु सम्बन्धि स’मस्या हुन पाउदैन ।२) तौल कम : अमलाले शरिरको मे’टाबो’लिजम बढाउँछ । जसले गर्दा शरीरको तौल निकै ति’ब्र रुपमा कम हुन थाल्छ ।
३) पा’चनः अमालामा पाइने फा’इबरले हाम्रो पा’चन पक्रियालाई मद्धत पुर्याउँछ । यसले गर्दा हामीलाई क’ब्जियत जस्तो स’मस्या हुन पाउदैन । ।४) क’मजोरी : अमलामा भिटामिन सीको मात्रा अ’त्यधिक हुने भएकाले तपाईंको शरिरलाई ऊ’र्जावान् राख्न सहयोग गर्दछ । यसले कमजोरी पनि टाढा राख्छ ।
५) अनुहारमा च’मक : यो खाँदा शरिरको ट’क्सिन टाढा रहन्छ र अनुहारको चम’क बढाउन सहयोग गर्दछ ।६) राम्रो कपाल : यसमा पाइने ए’न्टिअक्सि’डेन्टले कपाल च’म्किलो बनाउने र कपाल झ’र्ने स’मस्याबाट पनि मु’क्ति दिन्छ ।७) क्या’न्सर : अमलामा पाइने ए’न्टिअक्सि’डेन्टले का’र्सिनोजे’निक से’ल्सलाई बन्न रो’क लगाउँछ जुन क्या’न्सर’बाट ब’चाउनका लागि फा’इदाजनक मानिन्छ ।
मुगु–हुम्ला लिंकरोडमा बेलीब्रिज बन्‍ने